Sabboonummaan Dhaloota! Waaqoo Nooleetiin Lubbu qabeeyyii biyya lafaa irra jiran keessaa dhala namaa kan adda isa taasisu dandeettii waa yaaduu qabaachuu isaati. Addatti ammoo dhala namaa hadhaan tana lafa irra jiran kan (homo sapiens) jedhamuun beekkamu kana kan adda isa godhu of beekuu fi wal beekuun, akka namaatti yaaduun namni nama ta’uu isaatiin mirga akka […]
SEENAA Y.G (2005) Utubaan Manni Oromoon ijaarrachuuf deemuu gadi dhaabbateera. Irree jabaan dhaabbate. Eenyullee buqqisuu mitii, raasuu hin danda’uu. Dagaleen Utubaa walitti qabuus akkasuma rukutamee dhumeera. Hojii itti aanuuf maaltu nu barbaachisaa ? jennee mana keenya xumuruu qofaatu nu hafa. Qabsoon Oromoo gonkumaa kan duubatti hin deebinee ta’eera. Oromoon filmaata dhumaatti deemaa akka jiru diinni […]
Qixxeessaa Lammii | Onkoloolessa 09, 2017 Kan dabre yaadachuun wal yaadachiisuun kan ammaa beekuun wal hubachiisuu fi kan dhufuuf jiraatu tilmaamuuf nama gargaara. Seenaan jiruu fi jireenya ummata tokkoo madhaa maatii irraa akka jalqabu beekkamaadha. Haalli seenaa jiruu fi jireenya isaa dhawaata guddachaa, baay’achaa, babal’achaa fi hubachaa deemuun faana dagaagaa fi beekkamaa deema Dhalli namaa […]
(IAAF) — While the women’s race at the Chicago Marathon saw the coronation of a distance-running great, the men’s equivalent saw the arrival of a new champion at the 40th edition of the IAAF Gold Label road race on Sunday (8). Galen Rupp became the first US man since Khalid Khannouchi in 2002 to take […]
Daa’iman Oromoo Ibidaan Gubuun Cubbuu Dhiifatama hin qabne dha. Damee Boruu irraa Bultii sadan darban kana keessa daa’imaan Oromoo sadiin biyya Somaleland jedhamu keessatti akka ibidaan gubatan burqa oduu adda addaa tamsa’aa jira. Utuu biyyi lamaan waraana irra jiraatanii illee daa’imaan waan waraana keessaa qooda in fudhannee humni daa’ima miidhu abbaaramuu fi seera biyya lafaa […]